Google na-agbakwụnye msdị Google na Spreadsheets | Martech Zone
Google na-agbakwụnye msdị Google na Spreadsheets
Abụ m onye ọrụ Google Spreadsheets na-anụ ọkụ n'obi. Google ka gbakwunye ihe dị egwu na ndị ahịa azụmaahịa nwere ike ịmasị ịme data (ihe atụ: asọmpi na mmemme ịpụ) na-enweghị mkpa maka mmepe ọkachamara. Nwere ike ịmepụta ụdị iji biputere ozugbo na Google Spreadsheet gị!
Nke a ka dị anya site na ngwa ngwa dị ka Na-ama, ma ọ nwere ike ịba uru dị ukwuu maka ụfọdụ ụdị ngwa ngwa na nke ruru unyi. Karịsịa ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-eji ya eme ihe Ngwa Google. Ọchịchọ, olee otu Microsoft si asọmpi na nke a? 😉
Tags: alertsimirikitidashboardỊma Ọkwanjikeretalk apiromneySliderigwe mgbasa ozi na-elekọta mmadụstatdash
Feb 7, 2008 na 10:54 PM
Daalụ maka ịkekọrịta… nke ahụ bụ ihe m chọrọ! Nke a dị mma maka na ọ chọghị akaụntụ google maka ndị ọzọ na-eji ya. Aga m ekesa mpempe akwụkwọ, mana ọ bụghị mmadụ niile nwere akaụntụ, ugbu a ha nwere ike ịnye m ozi m chọrọ na-enweghị arụ ọrụ ozugbo na mpempe akwụkwọ.
Ọzọ ikpe nke nnukwu Ama site Doug!